Semalt: Izikhokelo ze-SEO
Njengoko sisazi, eyona ndlela isebenzayo yentengiso kukukhuthaza iimpahla kunye neenkonzo kwi-Intanethi. Namhlanje, akunakwenzeka ukufumana inkampani ngaphandle kwewebhusayithi yokuthengisa, kuba le yimfuno ephambili yeshishini. Kodwa ukuba newebhusayithi akuqinisekisi impumelelo ngaphandle kokunyuswa kwayo. Ukunyuswa kwewebhusayithi ngumsebenzi onomngeni, onokuthi ugcwaliswe kuphela yinkampani ye-SEO yengcali. Ungaze uyithembe iwebhusayithi yakho kwi-crooks engakwaziyo nokusombulula iingxaki zayo. Ukufezekiswa kwe-SEO njengenkonzo yokuphucula iwebhusayithi ilawulwa ngokufanelekileyo ngu- Semalt. Ngapha koko, i-Semalt ayisiyo kuphela i-SEO yokuphucula kodwa ikwangumlinganiso wesicwangciso sokuphucula.
Abanikazi bendawo abanamava basetyenziselwa ukuzama ukusebenza kunye neiwebhusayithi zabo okanye bathembele kubabambisi kule ndawo. Ngenxa yoko, ishishini labo litshonile. Kwaye kwimeko nganye enjalo, abantu bacela uSemalt ukuba agcine iiwebhusayithi zabo, asizange saliwe. Sitsibe ngokoqobo iindawo zabo ngaphandle kwethayile kwaye sibatyhalela kwindawo ephezulu yenjini yokukhangela. Kungangcono uzifunde ezi meko kwiwebhusayithi yethu, kubandakanya ingxelo elungileyo evela kumawaka abathengi. I-Semalt inamava amakhulu kunye nobuchule obuphezulu kwaye iyakwazi ukujongana nomsebenzi wabo nawuphi na umsebenzi onzima. Unokuphumelela ngempumelelo ye- SEO, kodwa kuphela ukuba uyenza ngeSemalt.
Ngaphandle kwetekhnoloji ye-SEO yokusika, awuzukufikelela kwisiphumo esifunwayo. Nangona kunjalo, impumelelo ayixhomekekanga ekusebenziseni uhlobo oluthile lobuchule. Kubalulekile ukuba uhambelane namaxesha kunye nokuphucula izikimu zokusebenzisa. I-Semalt ihlala iphuhlisa iindlela ezintsha zokukhuthaza iiwebhusayithi, zisebenzisa iitekhnoloji ezintsha. Inkampani izenzele njengenkokeli yokunyuswa kwe-SEO kunye nesiporho somhlaba wonke kwicandelo lokuphuhliswa kwewebhu.
Iqela leSemalt linabasebenzi abakumgangatho wehlabathi kuzo zonke izinto ezikhethekileyo. Ingcali nganye inokuthetha iilwimi ezininzi kwaye inamava amaninzi ekusebenzeni kakuhle kwe-SEO. Aba ngabaphathi abanamava, iingcali ze-SEO ezifanelekileyo, iingcali ze-IT, kunye neqela lababhali abanetalente. Ngaphandle koko, abaqulunqi bokuphela okuphezulu bayasebenza nakwiqela. Ngaphambi kokukhetha isisombululo sobuchule, iingcali zithathela ingqalelo zonke izinto ezichaphazela ukusebenza kakuhle kwephulo lewebhusayithi. Indawo nganye yiprojekthi entsha efuna indlela yomntu ngamnye kunye nendlela yokufikelela.
Ukunyuselwa kweSayithi kwiinjini zokukhangela kufanelekile kumashishini amaninzi anikezela ngeemveliso okanye iinkonzo zawo kwi-Intanethi. Le yindlela esebenzayo yokuthatha ingcambu kwi-injini yokukhangela ixesha elide kwaye uqhubeke ngokunyuka nenani leendwendwe. UkuKhangela kweNjini yokuKhangela (i-SEO), ngamagama alula, kukuseta kwezenzo zangaphakathi nangaphandle ezijolise ekuphuculeni imeko yewebhusayithi kwinjini yokukhangela. Ke ngokulandelelana, iwebhusayithi ingabekwa kakuhle ziinjini zokuphanda, kufuneka zisebenze ngendlela entsonkothileyo.
Ukuba newebhusayithi ayisiyonto ngaphandle kokuyazisa. Ngaphandle kokusebenza kakuhle, ukugcwala kwezixhobo kuya kuba sezantsi kakhulu okanye kungabikho zindlela zokwenza ezinye iindlela zokutsala ukugcwala. I-SEO ilungele nabani na oza kuthengisa iimveliso kwi-Intanethi, ekhangela abathengi, amaqabane, njl njl. Izikhundla ze-algorithms ziyaphucuka, iinkonzo ezintsha zokuhlalutya ziyavela kunye nokulandelelwa kweziphumo zomsebenzi zenzeka. I-Semalt yenza igalelo elikhulu kuphuhliso lwenkqubo yokusetyenziswa kwe-SEO.
Ukunyuswa kwe-webhusayithi kwi-injini yokukhangela kubandakanya imimandla emithathu ephambili: ubuhle bangaphandle, ukuthengiswa ngaphakathi, kunye nokufunyanwa kohlalutyo. Isalathiso ngasinye siqulatha iintshukumo ezahlukeneyo ekufuneka zenziwe ngokulandelelana okuthile. Ngombulelo kwishumi leminyaka yamava okuphucula ukwenziwa kwewebhusayithi, uSemalt unikezela ngezisombululo ezintsokothile njenge-AutoSEO, i-FullSEO, kunye nocazululo lweewebhusayithi oluya kuhlaziywa kwiwebhusayithi. Ukuqhuba le mikhankaso kuqinisekisa ukunyuka ngokukhawuleza kwizikhundla eziphezulu kwi-injini yokukhangela. Qwalasela nganye nganye.
Uninzi lwabanini bewebhusayithi baqinisekile ukuba i-AutoSEO sisisombululo esifanelekileyo sokuhambisa iwebhusayithi kwizikhundla eziphezulu kwi-injini yokukhangela. Ayenzekanga ngengozi, njengoko inani labasebenzisi abakwazile ukuphumelela ngeli phulo likhule ngokukhawuleza. I-AutoSEO ibandakanya amanqanaba aliqela ezenzo ezinyanzelekileyo ezenziwa ngokusebenzisana rhoqo nengcali ye-Semalt. Iingcali zenkampani nazo zithathe uxanduva ngesiphumo esiphumelelayo. Kwinkqubo, ulungelelwaniso lwewebhusayithi luya kutshintshwa ngokweemfuno zofikelelo. Ukunyusa kwi-injini yokukhangela ngokungathandabuzekiyo kuya kuba yimpumelelo. Nantsi imisebenzi ephambili esetiweyo kwi-AutoSEO:
Iphulo le-AutoSEO liqala nje ukuba ubhalise kwiwebhusayithi yethu. Uhlalutyo lwewebhusayithi luqala ukuya, kwaye kungekudala uza kufumana ingxelo yokuqala ngemeko yendawo yakho kwi-injini yokukhangela. Rhoqo, kunokubakho iimpazamo kwisakhiwo sewebhusayithi, ke injineli yethu ye-SEO ijonga ngononophelo icandelo ngalinye lewebhusayithi. Nje ukuba iimpazamo zichongiwe, uya kufumana ingxelo eneenkcukacha, kwaye injineli ye-SEO iya kuziphelisa. Phantse awunanxalenye kwinkqubo, kodwa uhlale uhlala unolwazi ngayo yonke into eyenzekayo. Emva kokuba zonke iimpazamo zilungisiwe, amagama abalulekileyo aya kukhethwa. Eli nqanaba lijolise ikakhulu ekuphuculeni ukugcwala kwewebhusayithi.
Isinyathelo esilandelayo iya kuba kukukhethwa kwee-intanethi. Ezi makhonkco zenzelwe ukuqhubeka nokufakwa kwizinto ze-intanethi. Ngenxa yokuba i-injini yokukhangela iyala umxholo ongenantsingiselo, kubalulekile ukuyigcina ifanelekile kwaye inentsingiselo. Umsebenzi weengcali zeSemalt kukukhetha izibonelelo ezifanelekileyo ukufaka amakhonkco. Umphathi wenkampani uzijonga ngokwakhe isenzo seengcali, ngoko akukho nto iyingozi kwiwebhusayithi yakho iya kuze yenzeke. Indawo yakho yewebhu ikhuselekile ngokupheleleyo.
Ngoku kufuneka senze utshintsho olufunekayo kwiwebhusayithi. Umphathi we-Semalt usebenza njengomcebisi wangaphandle kwaye wenza iingcebiso malunga nokuhlelwa kobugcisa. Enye ingxelo ibonisa ukuba loluphi utshintsho ekufuneka yenziwe ukuze lube nokusebenza kakuhle. Iingcali zisebenzisa i-FTP (iProtokholi yokuGqithisela iifayile) ukufikelela. Ukufikelela kwe-FTP kuyafuneka ekuphenduleni ngokukhawuleza kwiinguqulelo zenjini yokukhangela ukwenza uhlengahlengiso oluyimfuneko. Njengoko isikhundla sihlaziywa rhoqo, uSemalt ukwazisa kwaye wazise amagama aphambili. Amagama aphambili kufuneka angqinelane nomxholo, alawulwa yingcali kananjalo. Into ekufuneka uyenzile kukujonga kwaye ubhale phantsi iziphumo ezilungileyo. Ixabiso lenyanga lokuqhuba i-AutoSEO yi- $ 99.
Isebenza njani i-FullSEO
I-Semalt ibonelela ngomkhankaso we-FullSEO, oqinisekisa ukunyuswa ngempumelelo kwewebhusayithi ngexesha elifutshane. Eli phulo libandakanya ukulungiswa kwewebhu yangaphandle nangaphandle. Yonke le nkqubo inamanqanaba athile onyanzelekileyo. Ekupheleni kwamanqanaba omabini, umlinganiso uya kuba phezulu kakhulu. Njengalo naliphi na iphulo likaSemalt, i-FullSEO iqhutywa phantsi kolawulo lomphathi, zonke iintshukumo zenziwa yingcali. Kungekudala, uya kuqaphela ukuba iwebhusayithi yakho isondela kwizikhundla eziphambili ze-injini yokukhangela. Kufuneka iqatshelwe ukuba abakhuphisana nabo abasenako ukubamba isikhundla sewebhusayithi yakho.
Ukuqalisa iphulo, kufuneka ubhalise kwiwebhusayithi yethu. Nje ukuba ubhalise, iwebhusayithi yakho iqala ukuhlaziywa ngokuzenzekelayo. Zonke iintshukumo ezenziweyo ngeli nqanaba ziya kubonakalisa ukwenziwa kwangaphakathi. Kubandakanya iintshukumo ezininzi zokujonga ubume bewebhusayithi. Uya kufumana ingxelo eneziphumo zohlalutyo kunye noluhlu lweempazamo ezifunyenwe kulwakhiwo lwendawo. Zonke iimpazamo ziya kulungiswa yingcali ye-SEO, ngenxa yoko akufuneki wenze nantoni na. Okulandelayo, isazi se-SEO esisekela idatha evela kwingxelo ichaza eyona semantic. Ekusebenzisekiseni kwangaphakathi, ukhetho lwamagama aphambili ahambelana nomxholo wakho kunye nokuhanjiswa kwawo phakathi kwamaphepha ngamanye kubaluleke kakhulu. Amagama aphambili afanelekileyo anokukhuthaza ukugcwala kwiwebhusayithi. Ukufikelela kwi-FTP kunceda iingcali zenze utshintsho olufanelekileyo kwiwebhusayithi.
Okulandelayo kukusebenziseka kwangaphandle. Kuthetha ukusebenza kwi-backlinks kunye nokuzalisa izixhobo ze-niche ngazo. Kufuneka siqonde ukuba zeziphi amakhonkco ezisebenza kakhulu kwiinjini yokukhangela. Lo ngumsebenzi weengcali zethu. Bakujonga ngocoselelo umxholo. Kuya kufuneka ngokungqinelana nentsingiselo yezixhobo eziza kungeniswa kuzo amakhonkco. Le ngongoma inokuqwalaselwa njengeyona ibaluleke kakhulu.
I-Semalt isebenza ngeendawo ezininzi ezinokuthenjwa, ke akusayi kubakho zingxaki ngeli nqanaba. Iingcali ziya kukhetha izixhobo kunye nomxholo ofanelekileyo ohambelana neemfuno ze-SEO. Nje ukuba ungene kwikhonkco kwezi webhusayithi, unokulindela ukunyuswa okuphumelela. Iingxelo zexesha lethu zikwazisa malunga notshintsho kwindawo kunye nokukhula komgangatho. Uyabandakanyeka kwiphulo njengombukeli, kodwa ube ufikelela kulo naluphi na ulwazi. Iingcali zihlala zinxibelelana nawe ngalo lonke ixesha.
Ukuba unyanzelekile ukuba unqumamise ukunyusa i-SEO, ayizukubangela ingxaki enkulu. Nangona iGoogle isusa i-backlinks kwindawo yogcino lwedatha ngaphakathi kwenyanga, imigangatho ayizukuhla kakhulu. Indawo yokuma kwezinto ziya kuhlala kwinqanaba elithile, ngenxa yephulo le-FullSEO. Inqanaba liya kuba ngaphezulu kakhulu kunokuba lalinjalo ngaphambi kwephulo. Amaxabiso e-FullSEO axhomekeke kwizinto ezininzi, ikakhulu ezinxulumene nemeko yewebhusayithi yakho. Ixabiso lokugqibela liya kuqeshwa emva kokuvavanywa kwewebhusayithi yingcali ye-SEO kunye neziphetho zakhe. Iindleko azifanele zikoyike kakhulu kuba umvuzo ohleli uhlala ungaphezulu kuneendleko eSemalt.
Xa ujongene notshintsho olukhulu olwenzekayo ngaphakathi kwiinjini zokukhangela, kunzima kakhulu ukulwa nezixhobo zokudibanisa. Kunzima nokuchonga amanqaku aphambili ngendleko yokuba ngubani onokuqinisekisa umgangatho wenkqubela phambili yezixhobo. Iindlela ezindala zilahlekelwe kukufaneleka kwazo, kwaye iindlela ezintsha zonyuselo zisaqinisekile. Ngaphandle kohlalutyo lwenjongo, phantse akunakwenzeka ukufikelela kwisiphumo esifunayo. Kungenxa yesi sizathu ukuba uSemalt edale inkqubo yohlalutyo eyahlukileyo ejolise ekufumaneni iimpazamo zobugcisa kwiwebhusayithi nokuzilungisa. Eyona misebenzi iphambili yohlahlelo:
Uhlalutyo lubona iimpazamo ezinokwenzeka xa kufikwa kwisiza kwaye zisayine ngokukhawuleza oku. Kodwa ayisiyiyo kuphela injongo. Inkqubo itshekisha ngononophelo umxholo wewebhusayithi kunye neparamitha zobugcisa. Ihlalutya iwebhusayithi yabakhuphisana, kuvavanya amandla abo okhuphiswano. Ukuqala ingqokelela yohlalutyo, kufuneka ubhalise kwiwebhusayithi yethu. Iingxelo ezilandelayo zibonisa isikhundla sewebhusayithi yakho kwi-injini yokukhangela kunye nendawo yabo bakhuphisana nabo. Sebenzisa ulwazi olufunyenwe kwiingxelo, iingcali zethu zenza utshintsho olufunekayo kuthathelwa ingqalelo imigangatho ye-SEO.
Ukuba neakhawunti efanelekileyo kukunika izibonelelo ezithile. Ungongeza naliphi na inani leewebhusayithi zomntu wesithathu kwikhabhathi yakho. Iiwebhusayithi ezongeziweyo ziqala ukucazululwa ngokuzenzekelayo ngelixa ufumana ingxelo nedatha eneenkcukacha. Iinjini zokukhangela zihlala zihlaziya ii-algorithms zazo, ke ngabahlaziyi bethu kuphela abakwaziyo ukwenza utshintsho olululo kwiwebhusayithi. Uhlalutyo oluneenkcukacha luyenza ukuba ichaze amagama achanekileyo. Ngaphandle kohlalutyo, akunakwenzeka ukuba ukhethe amagama aphambili ahambelana nomxholo wewebhusayithi. Ngokukhetha, kunjalo, ungongeza amagama aphambili ahlukeneyo okanye ucime angafuneki. Inqaku leli, useto olusisiseko lwamagama aphambili afunwayo sele efakiwe. Le nkqubo ichaphazela ngokungathandabuzekiyo ukukhula okugcwala kwezithuthi.
Idatha yohlalutyo iqokelelwa ngewotshi. Ukuzibandakanya kwakho kukufumana iingxelo zomsebenzi kunye nokulungisa iziphumo ezilungileyo. Unokuqiniseka ukuba izenzo zichanekile ngenjini yokukhangela. Iziphumo ziyamangalisa: ngokwenene ubona isikhundla esiphezulu sewebhusayithi yakho. Ngapha koko, abakhuphisana nawe abasakwazi ukukukhupha kwi-injini yokukhangela. Sicebisa ukusebenzisa isiCwangciso soNxibelelwano lweSicelo, evumelanisa yonke idatha ngokuzenzekelayo. Ngokwenza konke ukwenza umzamo, uhlala usesikhathini kunye nohlaziyo lwangoku. Inkonzo yoHlaziyo ibandakanya iiphakheji ezintathu eziphambili ngeendleko ezahlukeneyo:
I-Semalt ikwabonelela ngesisombululo esibanzi sokuphuhliswa kwewebhu. Iingcaphephe zethu ziyila iwebhusayithi yezorhwebo ngokuhambelana neenkcazo zabaphulaphuli ekujoliswe kubo kunye neenjongo zeprojekthi, ukuphuhlisa uyilo oluhambelana nolunye, ukusebenza kwenkqubo. Sidibanisa izinto zewebhusayithi kunye nokusetyenziswa komntu wesithathu kunye neNkqubo yoLawulo lweMxholo, ngokwezifiso iimodyuli ze-e-commerce kunye nee-API.
Naliphi na ishishini lijolise ukuthengisa iimveliso zalo okanye iinkonzo kubaphulaphuli ekujoliswe kubo. Imakethi inkulu kakhulu kangangokuba kulula ukuba ilahle phakathi kwabakhuphisana ukuba ungaxeleli abathengi abanokubakho kunye nabathengi malunga nokunikezayo. Intengiso inokwahluka, kodwa intengiso yevidiyo ithathwa njengeyona isebenza kakhulu. Inokuchaphazela iimvakalelo ngakumbi kunezinye iifomati. Kungenxa yoko uSemalt ehambisa inkonzo ekhethekileyo yokudala ividiyo ekhethekileyo. Iya kubalaselisa zonke izibonelelo zenkampani yakho kwaye iya kuzisa isithuthi esikhulu kwiwebhusayithi yakho. Unokukhetha ividiyo yefomathi ngetemplate okanye uku-odola ukhetho ngokukhetha kwakho. Ividiyo yokuKhuthaza ngoSemalt iya kutsala abathengi abaninzi kwaye yenze ishishini lakho libe nempumelelo.
Ukushwankathela ukujongwa kwakhona kwenkampani yethu, sinokucebisa ukuba singacingi ixesha elide malunga nokuba ungaya phi ukuze ufumane ukuphuculwa kwewebhusayithi. Impendulo ingaphezulu nje kokuba icacile. Sibeka i-accents ngendlela eyahlukileyo. I-Semalt yenza okungaphezulu kokunyusa nje iwebhusayithi, yenza abantu batyebe ngokusebenza kwe-SEO. Impumelelo yethu yigama lethu. Nxibelelana nathi, sikulungele ukuthatha uxanduva ngobuninzi bakho.